Koox Shiinees Ah Oo Diego Costa Ka Dhigeysa Xiddiga Ugu Mushaharka Badan Caalamka Xagaagan - Laacib.net
Koox Shiinees Ah Oo Diego Costa Ka Dhigeysa Xiddiga Ugu Mushaharka Badan Caalamka Xagaagan
Kooxda Tianjin Quanjian ayaa ka shaqeyneysa heshiis ay kula wareegeyso weeraryahanka Chelsea Diego Costa marka uu suuqa kala iibsiga Shiinaha uu dib u furmo 19ka bisha Juun sida ay sheegtay Sky Sports.
Kooxda ka dhisan horyaalka Shiinaha ayaa isku dayday inay la wareegto Costa markii uu suuqa furnaa bishii Janaayo, laakiin milkiilahooda Shu Yuhui ayaa xaqiijiyay in wadahalada Costa loogu kaxeynayo Shiinaha inay weli socdaan.
Tianjin ayaa la aaminsan yahay inay diyaar u tahay inay Costa ka dhigto xiddiga ugu mushaharka badan dunida iyagoo u soo bandhigay mushahar uu isbuucii ku qaadanayo 650 kun ginni oo canshuurta ka dib ah.
Costa ayaa haatan mushahar gaaraya 150 kun ginni isbuucii ka qaata Chelsea iyagoo qandaraaskiisa kooxda Blues uu dhacayo xagaaga 2019.
Waxa uu dhaliyay 17 gool oo Premier League ah xilli ciyaareedkan laakiin kaliya seddex gool ayuu dhaliyay sannadkan 2017.
Tianjin waxa ay kaalinta 7aad kaga jirtaa horyaalka Shiinaha ka dib shan kulan oo la ciyaaray. Waxaa tababare u ah kabtankii hore ee xulka Talyaaniga Fabio Cannavaro, waxaana ay Villarreal kala wareegeen bishii Janaayo Alexandre Pato oo ay kula wareegeen 15 milyan ginni.
Horyaalka Shiinaha waxa uu bilowdaa bisha March waxaana uu ku egyahay bisha November. Suuqa kala iibsiga ee inta uu furan yahay xilli ciyaareedka waxa uu bilowdaa 19ka Juun waxaana uu ku egyahay 14ka Luuliyo.